स्याङजामा जन्मिएका आचार्य बालकृष्ण कसरी बने भारतका ४८ औं धनी ? – Akhabar Dainik
स्याङजामा जन्मिएका आचार्य बालकृष्ण कसरी बने भारतका ४८ औं धनी ?
नयाँदिल्ली, असोज ८ – पतञ्जली योग पीठका कार्यकारी प्रमुख आचार्य बालकृष्ण १०० धनीको सूचीमा परेका छन् । फोब्र्स पत्रिकाले प्रकाशित गरेको भारतका १ सयको सूचीमा उनी ४८ औं स्थानमा परेका छन् । यसलाई भारतमा धेरैले आश्चर्यका रुपमा हेरेका छन् । स्वामी रामदेवको सहयोगीका रुपमा ३ दशकदेखि रहेका बालकृष्णको पतञ्जली योगपीठमा ९७ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
यसअघि चीनको हुरुङ पत्रिकाले आचार्यलाई भारतको २५ औं धनी व्यक्तिका रुपमा राखेको थियो । विभिन्न उत्पादनमा लागिरहेको पतञ्जली योगपीठले एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेका छन् । अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीभन्दा सस्तो दरमा सामान बिक्री गरेका कारण पनि यसको लोकप्रियता बढिरहेको छ । पतञ्जली योगपीठमा रामदेवको खासै हिस्सेदारी छैन । तर, उनी कम्पनीका ब्रान्ड एम्बेस्डर हुन् । र, बालकृष्णले दैनिक प्रशासन हेर्ने गर्छन् । पतञ्जलीले विशेषगरी भारत र नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ । आफ्नो भारत भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पतञ्जली योगपीठको भ्रमण गरेका थिए । प्रचण्डले अध्यात्ममार्फत पतञ्जलीले आर्थिक विकास अघि बढाएकामा खुसी लागेको बताएका थिए ।
पतञ्जली योगपीठमा ५ हजार क्लिनिक छन् । पतञ्जली योगपीठका विभिन्न क्षेत्रमा झन्डै ११ हजार कर्मचारी छन् । पतञ्जली योगपीठको स्थापना सन् २००६ मा भएको हो । फोब्र्स म्यागजिनका अनुसार उक्त पीठले आफ्नो नाफा विभिन्न संस्थालाई दिने गरेको छ । स्याङजाको एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका आचार्य बालकृष्ण र स्वामी रामदेव कुनै समय एउटै कलेजमा पढ्ने गर्दथे । बालकृष्णको बाबुआमा अहिले पनि गाउँमा सामान्य जीवनयापन गरिरहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।